Kutheni iPluto ingeyiyo iplanethi: izizathu eziphambili | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 13/06/2022 10:00 | Ukuvumisa ngeenkwenkwezi
IPluto, iplanethi elityelweyo, ayisekho iplanethi. Kwinkqubo yethu yelanga kwakukho iiplanethi ezisithoba de ichazwe kwakhona ukuba iplanethi yiplanethi okanye ayikho, kwaye uPluto kwafuneka aphume ekudibaneni kweeplanethi. Ngo-2006 yamkelwa njengeplanethi encinci emva kweminyaka engama-75 yokusebenza kwicandelo leplanethi. Nangona kunjalo, ukubaluleka kwesi sijikelezi-langa kubaluleke kakhulu kuba umzimba wesibhakabhaka odlula kumjikelezo wawo ubizwa ngokuba yiPluto. Abantu abaninzi abazi kutheni ipluto ingeyiyo iplanethi.
Ngesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela ukuba zeziphi izizathu eziphambili zokuba kutheni iPluto ingeyiyo iplanethi kwaye zeziphi iimpawu zayo.
2 Ulwazi ngeeplanethi ezincinci
3 Umoya kunye nokwakheka
4 Ukujikeleza kwePluto
5 Kutheni iPluto ingeyiyo iplanethi?
Isijikelezi-langa esincinci sijikeleza ilanga rhoqo emva kweminyaka engama-247,7 kwaye sithatha umgama ozibhiliyoni ezi-5.900 zeekhilomitha. Ubunzima bePluto bulingana no-0,0021 ngokuphindaphinda ubunzima boMhlaba. okanye isiqingatha sesihlanu sobunzima beNyanga. Oku kwenza kube mncinci kakhulu ukuba kuthathwe njengeplanethi.
Ewe, ibisisijikelezi-langa se-International Astronomical Union kangangeminyaka engama-75. Ngowe-1930, yafumana igama layo kuthixo wamaRoma wehlabathi elingaphantsi komhlaba.
Ngenxa yokufunyaniswa kwesi sijikelezi-langa, izinto ezintle eziye zafunyanwa njengeKuiper Belt zafunyanwa kamva. Ithathwa njengeyona planethi inkulu encinci, emva kwe-Eris. Yenziwa ikakhulu kwiintlobo ezithile zomkhenkce. Sifumanisa ukuba umkhenkce wenziwe nge<em>methane engumkhenkce, omnye ngamanzi, omnye lilitye.
Ulwazi malunga nePluto luncinci kakhulu, kuba itekhnoloji ukusukela ngo-1930 ayizange ibe kude ngokwaneleyo ukubonelela ngezinto ezibalulekileyo ezifunyenweyo ezikude noMhlaba. De kube ngoko, yayikuphela kwesijikelezi-langa esasingatyelelwanga ziziphekepheke.
NgoJulayi 2015, ngenxa yemishini entsha yasesithubeni eyashiya uMhlaba ngo-2006, wakwazi ukufikelela kwiplanethi encinci kwaye wafumana ulwazi oluninzi. Olu lwazi luthatha unyaka ukufikelela kwisijikelezi-langa sethu.
Ulwazi ngeeplanethi ezincinci
Ngenxa yokwanda kunye nophuhliso lwetekhnoloji, iziphumo ezininzi kunye nolwazi malunga nePluto zifunyenwe. Umjikelo wayo wohlukile, unikiwe Ubudlelwane bayo obujikelezayo kwisathelayithi, iaxis yayo yokujikeleza, kunye notshintsho kubungakanani bokukhanya ukuyibetha.. Zonke ezi ziguquguqukayo zenza esi sijikelezi-langa sincinane sibe ngumtsalane omkhulu kuluntu lwezenzululwazi.
Yinto ethe kratya ukusuka elangeni kunawo wonke uMhlaba owenza isixokelelwano sezijikelezi-langa. Nangona kunjalo, ngenxa ye-eccentricity ye-orbit yayo, isondele kwiminyaka engama-20 kune-Neptune's orbit. I-Pluto yawela i-orbit ye-Neptune ngoJanuwari 1979 kwaye ayizange isondele eLangeni de kube ngo-Matshi 1999. Esi siganeko asisayi kuphinda senzeke de kube ngoSeptemba 2226. Njengoko esinye isijikelezi-langa singena kumjikelo wesinye, akunakubakho ukungqubana. Oku kungenxa yokuba i-orbit yi-17,2 degrees xa kuthelekiswa ne-ecliptic plane. Ndiyabulela kule nto, iindlela zee-orbits zithetha ukuba iiplanethi azize zihlangane.
IPluto ineenyanga ezintlanu. Nangona ubukhulu bayo buthelekiseka nobo be-asteroid yethu, ineenyanga ezi-4 ngaphezulu kunathi. Eyona nyanga inkulu, ebizwa ngokuba yiCharon, imalunga nesiqingatha sobukhulu bePluto.
Umoya kunye nokwakheka
Umoya wePluto unenitrogen, i<em>methane, kunye nekharbhon monoksayidi ethile. Ezi gesi zenza uxinzelelo oluthile kumphezulu woMhlaba, nangona ungaphantsi kwamaxesha angama-100.000 kunoxinzelelo olusemhlabeni kumphakamo wolwandle.
Imethane eqinileyo nayo yafunyanwa, ngoko ubushushu beplanethi encinci buqikelelwa ukuba bungaphantsi kwe-70 Kelvin. Ngenxa yodidi olukhethekileyo lwe-orbit, iqondo lobushushu linoluhlu olukhulu lokuguquguquka ecaleni kwalo. I-Pluto inokuba kufutshane ne-30 AU elangeni kwaye ifikelele kwi-50 AU kude nelanga. Njengoko sisimka elangeni, kubakho iatmosfera ebhityileyo kwisijikelezi-langa, ibe ngumkhenkce ize iwe phezu komhlaba.
Ngokungafaniyo nezinye iiplanethi ezifana neSaturn kunye neJupiter, iPluto inamatye kakhulu xa ithelekiswa nezinye iiplanethi. Emva kophando, kwagqitywa ukuba uninzi lwamatye kwiplanethi encinci ixutywe nomkhenkce ngenxa yobushushu obuphantsi. Njengoko sesibonile ngaphambili, umkhenkce onemvelaphi eyahlukileyo. Ezinye zixutywe ne-methane, ezinye ngamanzi, njl.
Oku kunokubalelwa kwiindidi zemidibaniso yeekhemikhali ezenzeka kumaqondo obushushu aphantsi kunye noxinzelelo ngexesha lokubunjwa kweplanethi. Ezinye izazinzulu qikelela ukuba iPluto yinyanga kaNeptune elahlekileyo. Kungenxa yokuba kunokwenzeka ukuba iplanethi encinci yaphoswa kwi-orbit eyahlukileyo ngexesha lokusekwa kwesixokelelwano selanga. Ke ngoko, i-Charon yenziwe ngokuqokelelwa kwezinto ezikhaphukhaphu ukusuka kungquzulwano.
I-Pluto ithatha iintsuku ezingama-6.384 ukugqiba ukujikeleza kube kanye kuba idityaniswa nemijikelo yeenyanga. Kungenxa yoko le nto uPluto kunye noCharon bahlala bekwicala elinye. I-axis yomhlaba yokujikeleza i-23 degrees, ngelixa i-axis ye-asteroid yokujikeleza i-122 degrees. Iipali ziphantse zibe kwiinqwelo-moya zazo ezijikelezayo.
Ekubonakaleni kwayo okokuqala, kwabonakala ukukhanya okuvela kwipali yayo engasezantsi. Njengoko umbono wethu wePluto utshintsha, iplanethi ibonakala iba mnyama. Namhlanje sinokubona i-ikhweyitha ye-asteroid ukusuka eMhlabeni.
Phakathi kowe-1985 nowe-1990, isijikelezi-langa sethu sasilungelelaniswa nokujikeleza kweCharon. Ke ngoko, ukufiphala kwelanga kwePluto kunokubonwa yonke imihla. Ngombulelo kule nyaniso, kwakunokwenzeka ukuqokelela ulwazi oluninzi malunga ne-albedo yale planethi encinci. Siyakhumbula ukuba i-albedo yinto echaza ukubonakaliswa kwemisebe yelanga yeplanethi.
Ngo-2006, ngokukodwa ngo-Agasti 24, i-International Astronomical Union (IAU) yabamba intlanganiso ebaluleke kakhulu: Chaza kanye ukuba yintoni iplanethi. Kungenxa yokuba iinkcazo zangaphambili aziphumelelanga ukuchonga kanye ukuba yintoni na iplanethi, kwaye uPluto wayesembindini wengxoxo, njengoko isazi ngeenkwenkwezi uMike Brown wafumanisa into kaEris enkulu kunePluto kwiKuiper Belt ngokwayo. Oku kuthintelwe i-astronomy ngelo xesha, kuba ukuba iPluto ifaneleka njengeplanethi, kutheni i-Iris ingekho? Ukuba kunjalo, zingaphi iiplanethi ezinokubakho ezisele kwibhanti yaseKuiper?
Ingxoxo nzulu de iPluto ekugqibeleni yaphulukana nesihloko sayo seplanethi ngexesha lentlanganiso ye-IAU ka-2006. I-International Astronomical Union ichaza iplanethi njengomzimba orhangqayo ojikeleza inkwenkwezi.. Kwakhona, iiplanethi kufuneka zibe nemijikelo ecacileyo.
I-Pluto ayihlangabezani nemfuneko yokugqibela, ngoko ayibandakanywa ngokusemthethweni ekubeni yiplanethi kwisixokelelwano selanga. Kodwa ingxoxo isavuliwe, abanye bephikisana ukuba uPluto kufuneka abuyele kuluhlu olusemthethweni. Ngo-2015, i-NASA yeNew Horizons mission yafumanisa ukuba iplanethi "yamandulo" yayinkulu kunokuba izazi ngeenkwenkwezi zazicinga.
Umphathi weMishini u-Alan Stern wayengomnye wezazi ngeenkwenkwezi ezingavumelaniyo nenkcazo yangoku yeplanethi, ephikisa ukuba iPluto kufuneka ihlale phakathi kweeplanethi zelanga.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokwazi izizathu zokuba kutheni iPluto ingekho iplanethi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Ukuvumisa ngeenkwenkwezi » Kutheni iPluto ingeyiyo iplanethi?